Orinasa 142,000 mahery mampiasa rindrambaiko automatique marketing. Ny antony 3 voalohany dia ny fampitomboana ireo fitarihana mahay, fampitomboana ny vokatra amin'ny varotra ary ny fihenan'ny marketing any ambony. Ny indostrian'ny automatisation marketing dia nitombo hatramin'ny $ 225 tapitrisa ka hatramin'ny $ 1.65 miliara tao anatin'izay 5 taona lasa izay. Ny infographic manaraka avy amin'ny Marketing Automation Insider dia manome tsipiriany momba ny fivoaran'ny rindrambaiko automatique marketing avy ao Unica nandritra ny folo taona lasa izay tamin'ny alàlan'ny fahazoana $ 5.5 miliara izay nitondra antsika tany amin'ny
Faly be izahay hanangana hetsika vaovao miaraka amin'ny Newsletter Marketing Technology sy ny Marketing Technology Radio Show… izahay koa mandefa andiana horonantsary Teknolojia Marketing! Nampiantranoina ary novokarin'ny 12 Stars Media, ity andiany ity dia hampahafantatra anao amin'ireo orinasan'ny teknolojia marketing sy ny olona ao ambadiky ny vokatra sy serivisy! Ny voalohany amin'ny andiantsika dia Aprimo, orinasan-tseraseran'ny varotra marketing miaraka amina tranokala faran'izay avo lenta ho an'ny mpivarotra. Eto Indianapolis dia azontsika
Amin'ity taona ity, mahita fandrosoana mahatalanjona eo amin'ny interface amin'ny mpampiasa ho an'ny mpivarotra izahay. Tamin'ny taon-dasa dia nihaona tamin'ny ekipa mpitarika tao Aprimo aho rehefa avy niresaka tamin'i Haresh Gangwani, ny VP an'ny Product Strategy. Ny orinasa dia nanova fitaovana vaovao ary nanomboka nanolotra lozisialy ho toy ny serivisy "Studio" Service. Nampahafantarina ahy ihany koa aho ary nihaona tamin'ny tale jeneralin'izy ireo Bill Godfrey lavany. Resaka tsy mampino momba ny Revolution Revolution… ary indrisy fa nanao izany aho
Talata, Novambra 6, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Izahay dia manana mpanjifa manana manokana izay tsara ihany mandra-pahatongan'ny Krismasy ary ny fametrahana mandritra ny andro mandra-pahatapitry ny fotoana dia ao anaty saha voatahiry ao anaty tahiry. Mila manoratra asa cron (asa voalahatra) aho izay manavao ny saha ho an'ny trano fisakafoanan'izy ireo isan-kariva. Tsy mbola nanoratra asa cron na oviana na oviana aho - misaotra ny mpiara-miasa amiko, Tim, tao Imavex nitarika ahy tamin'ny lalana marina.